IJamelgo: kusho ukuthini, yini ukusetshenziswa kwayo nama-synonyms. | Amahhashi eNoti
Jamelgo: kusho ukuthini nokusetshenziswa kwayo
UJenny monge | | Ukondla, Amahhashi
Esihlokweni sanamuhla ake sikhulume ngegama elithi "nag". Kuzo zonke izindatshana ezimbalwa besilokhu sicacisa futhi sifunda amatemu asebenza kumahhashi futhi kwesinye isikhathi angaholela ekudidekeni. Kunamagama afana nalawa esizoxoxa ngawo achaza isilwane esisesimweni esingesihle, futhi lokhu kuyinto okufanele siyigweme. Yize ezindaweni ezihlanganayo akudingeki ukuthi ibhekise entweni eyingozi.
Ingabe siyabona ukuthi leli gama lisho ukuthini?
1 Incazelo kaJamelgo
2 Ukusetshenziswa kwethemu
3 UJamelgo ezincwadini
4 Synonyms of Jamelgo
4.2 IMatalon noma i-matalona
5 Amanye amagama avela emhlabeni we-equine ongakuthakazelisa
Ngokwesichazamazwi seRoyal Spanish Academy, igama elithi jamelgo libhekisa ku ihhashi elibukeka njengeqembu, libhace kakhulu futhi libukeka kabi. Konke lokhu ngenxa yesilwane esingondliwe kahle.
Igama elithi jamelgo livela egameni lesiLatini elithi "famelicus" futhi elinencazelo yalo esingayiqagela, ngaphandle kokungabaza, sibonga elinye igama elisuselwe kulo esinalo ngolimi lweSpanishi: famélico. Yisichasiso esisetshenziselwa ukubhekisa kothile noma kulokhu isilwane esinezimpawu zokulamba njengokuncipha ngokweqile.
IJamelgo ivame ukusetshenziswa njenge indlela edelelayo noma lapho kunokuzethemba okukhulu, ngendlela ejwayelekile, lapho kukhulunywa nge-equine. Kulokhu kokugcina, isilwane akudingeki sibonakale sisibi njengoba igama lisikisela.
Sithatha lesi sihloko ukukhumbula ukubaluleka kokunakekela izilwane zethu nokuthi azifiki kulesi simo sokungondleki, into edlula indlala noma ukulamba. Ukungondleki kubangela izinkinga eziningi ezithweni nasemandleni yokuthi ubani ohlupheka ngakho. Ngakho-ke isilwane esibulawa yindlala sizoba nenkinga yokuhamba nokugxila.
Kumele sikuqaphele lokho Lapho sithola isilwane, kuba ngumthwalo wethu wemfanelo futhi kufanele simnikeze ukunakekelwa nokunakekelwa akudingayo ngokohlobo lwakhe, ubuhlanga, umsebenzi nezimo zakhe.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthola mayelana nokudla kanye amavithamini abalulekile nezakhamzimba ukuthi lokhu kumele kube nakho ukuze izilwane zethu zibe nempilo enhle.
Kuyo yonke imibhalo ungathola izinhlamvu ezichazwe zombili ngegama elithi indlala futhi ikakhulukazi, amahhashi achaziwe noma abhekiswe ngegama elithi jamelgo. Kubo bonke laba balingisi sizogqamisa bese sinikeza isibonelo kowaziwa kakhulu: URocinante, ihhashi elidumile likaDon Quixote de la Mancha. Ngaphezu kwalokho, igama le-equine livela ekudlaleni ngegama elifanayo le-nag: nag. Njengoba uMiguel de Cervantes aziveze kahle kucezu olulandelayo lwenoveli yakhe: «Wafika wambiza ngoRocinante, igama ngokombono wakhe mude, uyindodana futhi ubalulekile kulokho ayeyikho ngenkathi eyi-rocín, ngaphambi kwalokhu ayeyikho manje [...]".
URocinante, ihhashi likaDon Quixote
Synonyms of Jamelgo
Njengamagama amaningi, i-'jamelgo 'inezinombolo ezimbalwa omqondofana abangasetshenziswa nencazelo efanayoPhakathi kwazo, mhlawumbe okuhambisana kakhulu noma okusetshenziswe kakhulu kukhona okulandelayo:
Ngokubhekiswa ehhashini elincane, elinamahloni, elihlambalazayo futhi elibhekwa njengehhashi elibi. Leli gama livela egameni elithi 'jackfruit'.
IMatalon noma i-matalona
Isikhumba, sincane, futhi sigcwele ukubulala. Lokhu kubulala kuyizilonda noma futhi kungaba ngamanxeba, akhiqizwa ngokuxubha okuqhubekayo nokuphindaphindwayo noma ngokushaya okuthile. Kumahhashi luhlobo lokulimala olubonakala ngokuhlikihla i-rig.
Kungabhekisela ezitshalweni, kubantu noma kumahhashi. Kepha ukugxila entweni yokugcina esiyithandayo, kubhekiselwa ehhashini elincanyana futhi elibukeka kabi.
Leli gama lisetshenziswe ngezincazelo ezimbili emhlabeni we-equine. Ngakolunye uhlangothi ukubhekisa ku- sebenza amahhashi. Ngakolunye uhlangothi, kubhekiselwa ku- amahhashi amancane, anobude obuphansi futhi abhekwa njengohlobo olubi. Iphinde isetshenziselwe amahhashi abukeka kabi, amadala futhi ungabona ukuthi asebenze kakhulu, awashiya ebuthakathaka futhi ebunile. Masikhumbule uRocinante esikhulume ngaye emzuzwini edlule.
Iningi lalawa magama esiwabonayo asetshenziselwa ithoni yokuhlekisa nokuhlekisa noma endaweni yokuhlangana ukubhekisa kumahhashi.
Amanye amagama avela emhlabeni we-equine ongakuthakazelisa
Hay amagama ahlukahlukene asetshenziswa kuma-equines futhi angasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene ngokuya ngamasiko omlomo endawo ngayinye. Amanye ala magama ake axoxwa ngaphambilini kuleli khasi lewebhu, njenge:
Amagama Ngitwitter futhi ngiyapenda babhekisa ohlotsheni olufanayo lwejazi elinamachashazi, kepha kuya ngendawo yezwe kusetshenziswe igama elilodwa noma elinye futhi nakwezinye izindawo benza umehluko omncane phakathi kwamagama womabili.
Siphinde sakhuluma ngamagama asetshenziswayo amahhashi, amaponi namahhashi nokuthi bachaza ini.
Uma ufisa ukwazi ngale migomo, unganqikazi ukufunda izindatshana esinazo mayelana nezinkomo ezibhekisela kuzo.
Ngiyethemba ukujabulele ukufunda le ndatshana ngendlela ebengiyibhala ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amahhashi kaNoti » Amahhashi » Jamelgo: kusho ukuthini nokusetshenziswa kwayo